Siena Creative Photo Awards 2021 ၏ ဆုရရှိသူများ - ONE DAILY MEDIA
ဒါကတော့ Siena Creative Photo Awards 2021 ၏ဆုရရှိသူများစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။
အီရန်ဓာတ်ပုံဆရာ Masoud Mirzaei က The Lake”အတွက် ရရှိခဲ့သော တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း 137 နိုင်ငံမှ ဓာတ်ပုံဆရာများ တင်ပြသော သောင်းနှင့်ချီသော ပုံများထဲမှ ၎င်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ Creative Photo Awards ပြိုင်ပွဲတွင် ဆန်းသစ်သောချဉ်းကပ်မှုများသည် ကြည့်ရှုသူ၏မျှော်လင့်ချက်များကို စိန်ခေါ်ပြီး အံ့အားသင့်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးစွမ်းသည့် ခေတ်ပြိုင်ဓာတ်ပုံဆရာများ၏ အမျိုးအစား 17 ခုပါဝင်ပါတယ်။
အမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် အနိုင်ရရှိထားသော ရုပ်ပုံများကို အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်အထိ Siena Awards ပွဲတော်အတွင်း “I Wonder If You Can” ပြပွဲတွင် ပြသသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံဆု – The Lake by Masoud Mirzaei
အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ အကြီးဆုံးရေကန်နှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆဋ္ဌမအကြီးဆုံး ရေငန်အိုင်ဖြစ်သော Urmia Lake သည် အရှေ့အဇာဘိုင်ဂျန်နှင့် အနောက်အဇာဘိုင်ဂျန်ပြည်နယ်များကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။
(၂) အစားအသောက်– ပထမတန်းစား Fish by Claudio Dell’osa
ဤရွေးချယ်မှုအတွက် အငြင်းပွားဖွယ်မရှိပါဘူး ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ပုံမှန်ထုတ်ကုန်များသည် Caravaggio စတိုင်နောက်ခံများ၊ မိုနိုခရုမ်းနှင့် အလွန်မှောင်သော၊ အလင်းတန်းများဖြင့် လင်းလက်တောက်ပနေပါသည်။
(၃) Food & Beverage – Runner Up: Forbidden Food by Ana Straze
စိတ်ကူးမှာ သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကဲ့သို့ အသုံးများသော အရာများကို သုတေသနပြုကာ စမ်းသပ်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိသော ပစ္စည်းများ၏ လိုက်ဖက်ညီသော အသေးစိတ်အချက်များနှင့် အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှုများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာပါသည်။ ဒြပ်စင်များ ပေါင်းခြင်းနှင့် နုတ်ခြင်းတို့အပြင်၊ မတူညီသော ပုံစံများကို ရှာဖွေပြီး ၎င်းတို့၏ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်များကို အဓိပ္ပါယ်အသစ်တစ်ခု ပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားနေပါတယန။ Forbidden Food စီးရီးဖြင့် အလှအပဆိုင်ရာ အချက်လက်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် ကြိုးစားနေပါသည်။
(၄)ထုတ်ကုန်- ပထမတန်းစား- Andre Boto ၏ ကား
ဤပုံသည် ဤကားအတွက် အရေးပါမှုအားလုံးကို အလေးပေးသော နောက်ခံတစ်ခု ဖန်တီးသော ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) ထုတ်ကုန်- Runner up: The Waves by Carlo Marchi’
ငါ့စိတ်တွေက ချိုမြိန်တဲ့ ပင်လယ်ထဲမှာ နစ်မြုပ်နေပါတယ်။ ဒါက Absolut Citron Vodka ပုလင်းအတွက် ကိုယ်ပိုင်အမြင်ပါ။
(၆) ဂီတ-ပထမတန်းစား -Sound of Solitude by Eric Politzer
ကျူးဘား၏အကောင်းဆုံးအနုပညာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဖျော်ဖြေရေးအနုပညာများ၊ ပညာရေးစနစ်များ ရှိပါတယ်။ ကျူးဘားတွင် သင်သွားလေရာ၌ တေးဂီတကအမြဲတမ်း လွှမ်းခြုံထားပါတယ်။ ဤဓာတ်ပုံသည် ပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သော Havana ရုပ်ရှင်ရုံရှိ ကပွဲခန်းမတွင် တွေ့နိုင်သော ဂီတထူးချွန်အမျိုးအစားကို ပုံဖော်ထားပါတယ်။
(၇) ဂီတ-ပထမတန်းစား -Visual Symphonic by Amber Griffin
ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသား Symphony Orchestra ၏ ခမ်းနားထည်ဝါသော ပေါင်းစပ်မှုအား အမြင်အာရုံအဖြစ် ပုံဖော်ရန် အနုပညာရှင်များ၏ ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
(၈) ဖက်ရှင် -ပထမတန်းစား : The Colorful Fragile Bubbles by Zejian Li
အခုဆို ဆက်သွယ်ရေးများက ပိုအဆင်ပြေလာပေမယ့် အရမ်းအထီးကျန်သလို ခံစားနေကြတုန်းပါပဲ၊ ငါတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ပူဖောင်းတွေလိုပဲ ငါတို့ရဲ့ နက်နဲတဲ့ ခံစားချက်တွေက နုနယ်လှပါတယ်။
(၉) ဖက်ရှင် -ပထမတန်းစား :Free Fall by Arun Mohanraj
ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဖက်ရှင်တွေနဲ့ ကွာခြားတဲ့ အရာတစ်ခုကို အမြဲတမ်း ဖန်တီးချင်ခဲ့တယ်။ ဝဘ်တစ်ခုအတွက် ဖက်ရှင်ရိုက်ကူးမှုတစ်ခုမှာ ကော်မရှင်တစ်ခုအနေနဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါ မတူညီတဲ့ ၀တ်စုံတွေကို မော်ဒယ်တချို့နဲ့ ရေအောက်ရိုက်ကူးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ အမူအရာတွေကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ပုံများတွင် ခံစားချက်ကို ပေါင်းထည့်ရန် ခေတ်ဟောင်း ဒီဇိုင်းအ၀တ်အစား အချို့ကို ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
(၁၀) အလှအပ- ပထမတန်းစား-Composed by Robert Piccoli
ဒအလှတရားရဲ့ သဘောတရားကို စူးစမ်းချင်ခဲ့တယ်။ အလှတရားဟာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး စိတ်အနှောက်အယှက်ကင်းသည့် အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်၊ စိတ်နှင့် စိတ်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး သူမက ထို ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
(၁၁) အလှအပ- ပထမတန်းစား- My Love Has the Prettiest Rose Petals by Kristian Piccoli
ဤပုံတွင်ရှိသော ပန်းရောင်နှင်းဆီပွင့်ချပ်များက ကျွန်ုပ်အား နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနှင့် တည်တံ့ခိုင်မြဲသော အလှကို ပြောပြပါတယ်။ အလှတရားသည် ပန်းပွင့်များ၏ ပျော့ပျောင်းမှုတွင် မူတည်နေပါတယ်။
(၁၂) အဖွင့်အခင်းအကျင်း – ပထမတန်းစား – Eddy Verloes ၏ “Losing our Minds”
“Losing our Minds” ကို COVID-19 အကျပ်အတည်း၏အစတွင် ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း၊ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ကာလဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းထန်တဲ့အခြေအနေက သူ့အတွက် စိန်ခေါ်မှုအသစ်ဖြစ်ပြီး လူ့ရဲ့ စိတ်ကို ဆုံးရှုံးသွားစေပါတယ်။ အကြောက်တရားက သူ့ကို လွှမ်းမိုးဖို့ ကြိုးစားရင်း အေးခဲသွား သော ကမ္ဘာကြီးကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး မိခင်သဘာဝက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးလိုက်ပုံရတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို စတင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မိခင်ကမ္ဘာကြီးကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အတ္တဝါဒ၌ အလွန်အကျွံအသုံးချခဲ့မိပါတယ်။
(၁၃) အဖွင့်အခင်းအကျင်း- ဆုရဓာတ်ပုံ Together in the Face of Uncertainty by Miguel Muñiz
2020 ခုနှစ်ကို ကပ်ရောဂါ၏နှစ်အဖြစ် မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ခက်ခဲသောနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကပ်ရောဂါနှစ်၏နွေရာသီတွင်သက်ကြီးရွယ်အိုစုံတွဲတစ်တွဲသည်ပင်လယ်ထဲသို့ ဆင်းကာ နှစ်ဦးသားသည် မြူနံရံဆီသ အရှေ့ဘက်သို့မျက်နှာမူကြကာ… မသေချာမရေရာမှုများပေါ်လာကြပါတယ် ဆက်ငေးကြည့်ရင်း လက်တွေရောယှက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အတူတူမျှော်လင့်ချက်ရှိကြပါတယ်။
(၁၄) လေ့လာဆဲ – ပထမအမျိုးအစား- Giulio Fabbri မှ Hotel Paradise
ဤရုပ်ပုံသည် လူသားတို့၏ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော စိတ်ဓာတ်၏ အပြုသဘောဆောင်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ လူတွေဟာ သူတို့နေထိုင်ရာ မြို့ပြဟာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပုံရသော်လည်း သာမန်လူ တွေနဲ့ အေးချမ်းတဲ့ဘဝနဲ့ တကယ့်ရုပ်သဏ္ဍာန်တွေပါပဲ။
(၁၅) လေ့လာဆဲ – ဆုရဓာတ်ပုံ -When Claudine Drinks Coffee …by Matthias Jung
အိမ်မှာနေရခြင်းရဲ့ လုံခြုံမှုနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုကို ပေါင်းစပ်ရတာ နှစ်သက်ပါတယ်။ အိမ်များသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ Menton မှဖြစ်ပြီး ရှုခင်းသည် Gemany ရှိ Sylt ကျွန်းမှဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်အပြည့်အစုံမှာ “ကော်ဖီသောက်တဲ့အခါ ပင်လယ်ကို ခဏခဏ တွေးတတ်တယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
(၁၆) ရှင်သန်ခြင်း – 1st classified: Olga Rudenok မှ Rembrandt Still Life
Rembrandt က သူ့ပန်းချီကားတွေဆွဲတဲ့ အခါ အလင်းရောင်ကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ဤအလင်းသည် Rembrandt၏ ပုံတူပန်းချီများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်ဟု ထင်ရပါတယ် ။ ရုပ်ငြိမ်ရုပ်ပုံတွေအတွက်လည်း စံပြပါပဲ။
(၁၇) ရှင်သန်ခြင်း– Runner up: Still Life With Dandelions by Iwona Czubek
Dandelions နှင့် ရှင်သန်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဒတ်ခ်ျပန်းချီကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဓာတ်ပုံကို tripod နှင့် နေ့အလင်းရောင်ဖြင့် အိမ်စတူဒီယိုတွင် 2020 ခုနှစ်က ရိုက်ယူခဲ့ပါတယ်။ Canon 6D ကင်မရာနဲ့ 85 mm မှန်ဘီလူးကို သုံးပါတယ်။
(၁၈) ပုံတူရေးပညာ – ပထမတန်းစား – Robbie by Steve Wise
Robbie သည် အသက်4နှစ်အရွယ်တွင် ၎င်း၏အိပ်ခန်းအတွင်း မတော်တဆမှုတစ်ခု၌ မီးလောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ 95% အထိ မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ လက်ချောင်းတွေ ပါ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ သူသည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော ဘဝတစ်ခုရှိသော်လည်း တတ်နိုင်သမျှ သာမာန်လူဘဝအဖြစ် ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(၁၉) ပုံတူရေးပညာ – ဆုရဓာတ်ပုံ -African Flower by Reiny Bourgonje
နယ်သာလန်တွင် 1815 မှ 1839 ခုနှစ်အတွင်း နေထိုင်ခဲ့သော Eelke Jelles Eelkema ၏ ပန်းချီကားတွင် အာဖရိကန်မိန်းကလေးငယ်ကို ပန်းချီရေးဆွဲခဲ့ပါတယ် ။ ၀တ်စုံကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ပလတ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
(၂၀) တိရိစ္ဆာန်- ပထမတန်းစား – Priceless by Pedro Jarque Krebs
မှောင်ခိုဈေးကွက်တွင် ကြံ့ချိုများဟာ တစ်ကီလိုလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀၀၀၀ ရှိပါတယ် ။ ရွှေထက်ဈေးကြီးပြီး အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ ဆင်စွယ်တွေနဲ့မတူဘဲ ကြံ့ချိုတွေကို keratin နဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ သို့သော် အချို့သော လူသားများ၏ မသိနားမလည်မှုနှင့် အယူသည်းမှုတို့က ၎င်းကို ဆေးဖက်ဝင် ဂုဏ်သတ္တိများအဖြစ်သုံးနေကြပါတယ်။ ဝယ်သူရှိသရွေ့ အရာရာမှာ ရောင်းသူရှိပါမယ်။ ဤသည်မှာ ပညာဗဟုသုတနဲ့သာသက်ဆိုင်ပါတယ်။
(၂၁) တိရိစ္ဆာန် – ပထမတန်းစား – Chameleon in the Bedroom by Jo Sax
အပြာရောင် ပုတ်သင်ညိုကို အပြာရောင် ခေတ်ဟောင်းပန်းပွင့်နောက်ခံပုံ အိပ်ခန်းထဲတွင် Hassleblad H5x ဖြင့် ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
(၂၂) ဗိသုကာလက်ရာ- ပထမတန်းစား -Eternit by Ingun Alette Maehlum
Eternit boards များသည် ပြီးပြည့်စုံသော ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ဂွမ်းနှင့် ရောစပ်ထားသော ဘိလပ်မြေသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် မလိုပဲ အထူးသဖြင့် ရာသီဥတု ကြမ်းတမ်းနိုင်သည့် ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာ အသုံးများ ရေပန်းစားပါတယ်။(70) ပြည့်နှစ်များတွင် ၎င်းကျောက်ဂွမ်းများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းက အလွန်အန္တရာယ်များကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး နော်ဝေးတွင် ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် တားမြစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် eternit board အိမ်များ ရှိနေပါသေးတယ်။
(၂၃) ဗိသုကာလက်ရာ – ဆုရပုံ – Claudio Sericano ၏အိပ်မပျော်ခြင်း
ညဘက် မီးတွေပိတ်ပြီး လူတွေ ငြိမ်သွားချိန်မှာ အိပ်မပျော်သူတစ်ယောက်ကတော့ သူ့ပြတင်းပေါက်ကနေအမှောင်ထုကို စောင့်ကြည့်နေပြီး ကမ္ဘာကြီး ၏နေ့သစ်ပြန်လည်စတင်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်
(၂၄) မင်္ဂလာဆောင် – ပထမတန်းစား – The Flying Bride by Soven Amatya
ဂျူးမင်္ဂလာပွဲအခိုက်အတန့်မျဟာ စိတ်ခံစားမှုများစွာဖြင့် ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ The Horah မပါဘဲ မင်္ဂလာပွဲတစ်ပွဲ ပြီးပြည့်စုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည် အလွန်အသက်ဝင်သော အကဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် သတို့သမီးနှင့် သတို့သားတို့ လေထဲတွင် ကခုန်ခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်လေ့ရှိပါတယ်။
(၂၅) မင်္ဂလာပွဲ – ဆုရဓာတ်ပုံ -Light and Shadow by Fabio Mirulla
Siena ၏သမိုင်းဝင်စင်တာရှိအလင်းနှင့်အရိပ်ဖြစ်ပါတယ် ။ မြို့မှာတွေ့နိုင်တဲ့ ဂျီသြမေတြီတွေဟာ မင်္ဂလာမောင်နှံတွေကို သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲနေ့ ပုံဖော်ရာမှာ ပြီးပြည့်စုံစေပါတယ်။
(၂၆) သဘာဝရှူခင်း – ပထမတန်းစား – Palm Grove by Hans Wichmann
အီဂျစ်နိုင်ငံ နိုင်းမြစ်ပေါ်ရှိ အပျော်စီးသင်္ဘော ကုန်းပတ်မှ ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်းပတ်ပေါ်တက်စဉ် ကင်မရာကို အမြဲဆောင်ထားသောကြောင့် စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် ပျောက်ကွယ်သွားသည့် ဤမြင်ကွင်းကို ဖမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော နှစ် 2,000 က ရှေးခေတ်ကာလများကို သတိရစေပါတယ်။
(၂၇) သဘာဝရှူခင်း- ဆုရဓာတ်ပုံ – Gunung Bromo by Jun Epifanio Pagalilauan
Mount Bromo သည် ဂျာဗားအရှေ့ပိုင်းရှိ Tengger တောင်များ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆိုမားမီးတောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 2,329 မီတာ (7,641 ပေ) ရှိကာ အမြင့်ဆုံးတောင်ထွတ်မဟုတ်သော်လည်း အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ပါတယ် ။ ထိုဧရိယာသည် အရှေ့ဂျာဗားရှိ ခရီးသွားများ လာရောက်လည်ပတ်မှု အများဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး မီးတောင်သည် Bromo Tengger Semeru အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် ပါဝင်ပါတယ်။
(၂၈) အယူအဆ – ပထမအဆင့် -Jairo Alvarez ၏ ရိုးသားဖြူစင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ လမ်းပျောက်နေတာလား ? ဒါမှမဟုတ် အဆုံးမရှ်ိတဲ့ ရှူခင်းတွေကို မမြင်နိုင်ပဲ ပိတ်မိနေကြတာလား ??
(၂၉) အယူအဆ – ဆုရဓာတ်ပုံ – လွတ်လပ်မှု၏အရသာ (Debratna Ghosh)
ဓာတ်ပုံသည် မတူညီသောအကြောင်းအရာများကြား လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ဖော်ပြထားပါတယ် ။ မတူညီသောအခြေအနေနှစ်ခုမှ လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြမှုတို့ဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး မတူညီသောကမ္ဘာများကြားမှ ဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
(၃၀) စိတ်ကူးဉာဏ် – ပထမအဆင့် – The Fork #28 by Filippo Drudi
ကျွန်ုပ်က ခက်ရင်းတွေကို ကြိုက်တယ်၊ သူတို့ကို သဘောကျတယ်။ ပြေပြေပြစ်ပြစ် မိန်းမဆန်ဆန် အချိုးကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။။ အဲဒါကို နက်နက်နဲနဲလေ့လာပြီး သူ့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများစွာကို ရှာဖွေကြည့်ချင်ခဲ့တယ်။ ဤဓာတ်ပုံဟာ ကျွန်ုပ်၏ပရောဂျက် “The Fork” ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး ဤနေ့စဥ်အရာဝတ္တုများဖြင့် စိတ်ကူးယဥ်နိုင်‌သော အရည်အသွေးများကို ထုတ်ပြလိုပါတယ်။
(၃၁) စိတ်ကူးဉာဏ် – ဆုရဓာတ်ပုံ – Bozell II by Ibrahim Nabeel Salah
Citadel တောင်ကို ကာရံထားသော တောင်ခုနစ်လုံး ပါရှိသော ကျွန်ုပ်၏မြို့ Amman မှ ရိုက်ကူးထားသောလက်ရာဖြစ်ပါတယ်။
(၃၂) ဖြစ်ရပ် – ပထမအဆင့် -Spin Club Tapestry by Astrid Reischwitz
ကျွန်ုပ်၏ပရောဂျက် “Spin Club Tapestry” သည် ဂျာမနီမြောက်ပိုင်းရှိ Spin Club များ၏ အစဉ်အလာ ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ယူခြင်းဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုအမှတ်တရများကို စူးစမ်းလေ့လာပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် ဂျာမနီမြောက်ပိုင်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးရွာလေးတွင် ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ် ။ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ယနေ့တိုင် ၎င်း၏ ရိုးရာဓလေ့များဖြင့် ထင်ရှားပေါ်လွင်သော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ် ။ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ရွာက အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့အိမ်အတွက် သိုးမွှေး၊ ပန်းထိုး၊ ချုပ်ထည်တွေကို ပြုလုပ်ဖို့အတွက် “Spinneklumps” (Spin Clubs) မှာ ပုံမှန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ အလုပ်တွဲလုပ်ရင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို တက်ကြွစေတဲ့ လှပတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ၊ ဝမ်းနည်းမှုနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုဇာတ်လမ်းတွေကို ပုံဖော်ကြည့်ပါတယ်။
မျက်မှောက်ခေတ်တွင် ရွာသူရွာသားများသည် ဤအစဉ်အလာအတိုင်း ဆက်လက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသော်လည်း ကော်ဖီနှင့် ကိတ်မုန့်အကြောင်း ပုံပြင်များကိုသာ မျှဝေကြပါတယ် ။ ဤစီးရီးတွင် ကျွန်ုပ်၏ပေါင်းစပ်ပုံများသည် ရွာမှ ဓာတ်ပုံဟောင်းများနှင့် Spin Club များ၏ ပုံများကို ပေါင်းစပ်ထားပါတယ် ။
ချည်ထည်၏ အပိုင်းအစများဖြင့်ပြန်လည်ဖန်တီးကာ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဖြင့် ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အတိတ်ကို ချိတ်ဆက်ပါတယ် ။ Spin Club ၏ စားပွဲခင်းများ၊ လက်သုတ်ပုဝါများနှင့် နံရံတွင်တွဲလောင်းလိုက်ကာများ (၁၇၉၉ ခုနှစ်မှ ) များဟာ မျိုးဆက်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဤအထည်များထဲမှ လက်ရာများကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်ဘိုးဘေးများ၏ ဘဝလမ်းကြောင်းကို မြင်ယောင်မိပါတယ် ။ အထည်များ၏ ဆယ်စုနှစ်များစွာ အသုံးပြုပြီးနောက် အချိန်ကြာလာခြင်း၊ စွန်းထင်းခြင်းနှင့် ပုံပျက်ခြင်းတို့ကိုလည်း ဖော်ပြပါတယ် ။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ချုပ်ထားသော ပုံစံများသည် မူရင်း Spin Club ဒီဇိုင်းများ ၏ မှတ်ဉာဏ်အပိုင်းအစများသာ
ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မှတ်ဉာဏ်ဆိုတာ ခဏတာဖြစ်ပြီး အမှတ်တရအဖြစ်နဲ့ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ တခါတရံ ချုပ်ရိုးမပြည့်မစုံဖြစ်ပြီး အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် ပြုပြင်ရန်အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖန်တီးပေးပါတယ် ။ ကျွန်ုပ်တို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့၏ သမိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းထံမှလွှမ်းမိုးမှုရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ် ဘဝ၏ လက်ရာများသည်လည်း ယခု ကျွန်ုပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော်လည်း နောင်တွင် မျိုးဆက်သစ်များ၏ လှပမှု နှလုံးသားများဖြင့် ချုပ်နှောင်ထားပါလိမ့်မယ်။
(၃၃) ဖြစ်ရပ် – ဆုရဓာတ်ပုံ – Remembering the Twilight by Molly Mccall
မှတ်ဉာဏ်၏ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ အချိန်၏ဖြတ်သန်းမှု၊ နေရာအာရုံခံစားမှုနှင့် အမှတ်အသားပြုမှုတို့ကို 1899 ခုနှစ်တွင် အိုင်ယာလန်ကဗျာဆရာ William Butler Yeats ရေးခဲ့သော “Into the Twilight” ၏ အမြင်ဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား ကိုးကားထားပါတယ်။ Yeats က Into theTwilight ကို အိုင်ယာလန်၏ အလွန်မှောင်မိုက်သောကာလတစ်ခုတွင် ရေးခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်သည် ပြန်လည်နိုးထလာခါနီးတွင် ရှိနေသည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ် ။
သူသည် ဤအချိန်ကို ကဗျာဆန်ဆန် ဖြင့် မှော်ဆန်သော အသွင်ပြောင်းသည့် နေ့တစ်နေ့ဖြစ်နိုင်ချေများ ပြည့်နှက်နေသည့် အချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကဗျာသည် တက်ကြွခြင်း၊ သဘာဝတရား၏ တန်ခိုးနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းမှု နှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းခြင်း၏ ရလဒ်အဖြစ် ပကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖွဲ့ဆိုထားပါတယ် ။
အိုင်ယာလန်၏ မှော်အတတ်နှင့် ပုံပြင်များ သည် ကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်ကပင် လွှမ်းခြုံခဲ့ပြီး မိဘဘိုးဘွားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဘိုးအဘွားများအဆက်ဆက်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်တည်မှုသဘော ၊ မည်သို့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အတိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်တည်မှုတို့၏ ကွဲလွဲမှုများကြောင့် မည်ကဲ့သို့ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကို စိတ်ဝင်စား စေပါတယ် ။
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးကို လွှမ်းမိုးနေသော အပြောင်းအလဲနှင့် မငြိမ်မသက်မှုများကြောင့် အတိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်း တွေးလျှင် ဤကဗျာကို သတိရမိပါတယ်။ အနုပညာရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ အမှောင်ခန်း ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပြုပြင်မှုဆိုင်ရာ အရည်အသွေးများနှင့် ပန်းချီ၊ ဖယောင်းနှင့် ခဲတံ တို့ကဲသို့လက်ရာမြောက်သော အနုပညာပစ္စည်းများ၏ ဆက်စပ်မှုကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် ။
ဤအရာများ၏ ပုံသေရုပ်ပုံတစ်ပုံဟာ လက်တွေ့ဘဝ၏ လေးနက်သော ပုဂ္ဂလအမြင်ကို ပေါင်းစပ် ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ ကျွန်ုပ် ဖန်တီးမှုဟာ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများနှင့် ခေတ်ဟောင်းဓာတ်ပုံများကို ပေါင်းစပ် ဖန်တီးထားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ပုံများကို အရောင်တင်ကာ ဆီများဖြင့် ဆေး ခြယ်သပြီးနောက် ခေတ်ဟောင်းပုံရိပ် စာမျက်နှာများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ဓာတ်ပုံ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
စကားလုံးမပါဘဲ စာမျက်နှာ နှစ်မျက်နှာပါ အခင်းအကျင်းများဖြင့် ကဗျာတစ်ပိုဒ်ချင်းစီကို ကိုယ်စားပြုပြီး ပုံတစ်ပုံစီ၏ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် 16 ပိုဒ်ချင်းစီအတွက် ပုံတစ်ပုံစီရှိပါတယ် ။ အသစ်နှင့်အဟောင်း ပေါင်းစပ်မှုများက သဘာဝတရား၊ အချိန်နှင့်မှတ်ဉာဏ်တို့ကိုချိတ်ဆက်ထားသည့် အခြေအနေတစ်ခုအဖြစ်ပုံရိပ်ပုံ တစ်ပုံဖြစ်လာပါတယ်။